AMD waxay sii deysay darawalkii AMDGPU oo taageero ka helaya X.Org 18.1 | Laga soo bilaabo Linux
Maalmo ka hor AMD waxay dadweynaha u soo saartay nooc cusub oo darawalkeeda ah Si loogu adeegsado serverka X.Org, waxaan ka hadlaynaa AMDGPU ilaa X.Org 18.1.
Inkasta oo inta badan taageerada qalabka Linux horeyba loogu dhisay kernel, Mararka qaarkood way fiicantahay in la isticmaalo soosaaraha soosaaraha la siiyay si loo helo qalabka ugu fiican, sida ay tahay kiiska qaar ka mid ah kaararka muuqaallada ee Intel, NVIDIA iyo AMD.
Xaaladda gaarka ah ee AMD, wade soo saarahaan ayaa had iyo jeer ku jira turxaan bixin joogto ah iyo cusbooneysiin.
AMD waxay dhowaan soo saartay cusbooneysiin ku saabsan darawaladooda DDX xf86-video-ati iyo xf86-video-amdgpu si loogu adeegsado X.Org Server.
Darawalladan DDX marar dhif ah ayaa la cusbooneysiiyaa Sababtoo ah dhammaan shaqooyinka xiisaha leh ee maanta ka socda booska kernel (DRM) ama Mesa et al, isticmaaleyaal badan oo ku shaqeeya DDX guud ahaan darawalka xf86-video-modesetting.
Darawalka xf86-video-amdgpu 18.1 ayaa maanta la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo AMDGPU DC Noocyada ugu dambeeya ee kernel-ka Linux waxaa hadda lagu akhrinayaa hagaajinta gamut iyo khariidadaha midabka X11 ee qoto dheer midabka Xorg 30.
Sidoo kale waxaa jira taageero maareyn midab sare leh oo lagu daray DC.
Shaqada kale waxaa ka mid ah kireynta soosaarka RandR ee looga baahan yahay taageerada SteamVR, hagaajinta adag ee taageerada TearFree, iyo hagaajinta kale.
Tan waxaa ogeysiiyey Michel Dänzer iyada oo loo marayo liiska boostada halka ay ku qoran tahay waxyaabaha soo socda:
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo nooca 18.1.0 ee xf86-video-amdgpu, oo ah darawalka Xorg ee AMD Radeon GPUs oo ay taageerayaan darawalka kernel ee amdgpu.
Noocani wuxuu la jaan qaadayaa noocyada xserver 1.13-1.20.
* Markaad isticmaaleyso DC sida Linux 4.17:
- Waxay taageertaa shaqeynta maareynta midabka sare.
- Waxay taageertaa hagaajinta gamma iyo khariidadaha midabka X11 marka Xorg uu ku socdo qoto dheer 30 sidoo kale.
* Taageerada kireynta alaabada RandR ee macaamiisha.
* Qalabayn adag oo kaladuwan oo loogu talagalay TearFree. Gaar ahaan, waxaan hagaajiyay dhowr kiis oo curyaaminta TearFree waqtiga shaqada ay ka dhalan karto geedi socodka Xorg baraf ama shil.
* Waxaa lagu xaliyay arrimo dhismo m4 la xiriira oo leh noocyo gawaarida duugga ah oo duug ah.
Oo lagu daray hagaajinno iyo hagaajinno kale. Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo gacan ka geystay sii deyntaan si kasta ha noqotee!
Dhanka kale, xf86-video-ati 18.1 DDX wuxuu leeyahay xoogaa hagaajinta musuqmaasuqa, taageerida kireysiga wax soo saarka RandR, hagaajinta xoogga TearFree, iyo hagaajinta kale.
Liiska buuxa ee hagaajinta kuwan cusub ee darawalnimada AMD / Radeon DDX ah ayaa laga heli karaa liiska boostada.
Sidee loo rakibaa darawallada AMDGPU Linux?
Si aad ugu rakibto wadayaasha AMDGPU nidaamkaaga, waa inaad tagtaa bogga rasmiga ah ee AMD iyo qaybteeda soo dejinta waxaad ka heli kartaa xirmada lagu tilmaamay kaarkaaga muuqaallada fiidiyowga ah.
Waa inaan ka digaa in moodooyinka waxyar ka yar 4 sano ayan heli doonin taageero toos ah tan, in kasta oo ay la tashan karaan bogga soo dejinta waxaa bixisay AMD tusaalahaaga illaa nooca Xorg la taageerayo.
Kuwa isticmaala Arch Linux, waxay leeyihiin xarun lagu rakibo nooca Xorg ee ay jecel yihiin, in kasta oo ay tahay inay ka tirtiraan oo dib u soo celiyaan dhammaan jawiga garaafyada ay hayaan.
Hadda ka dib soo degsashada xirmada, waa inay soo saaraan feylka meel la yaqaan maadaama ay tahay inay ka soo rakibaan TTY iyagoo horay u joojiyay bay'adooda garaafka ah.
Si tan loo sameeyo, ku qor kaliya Ctrl + Alt + F1, waa inuu ku soo galayaa aqoonsigooda nidaamka adeegsi iyo nooca:
Hadda waxaan dooneynaa inaan galno feylka soo dejinta, taas oo ah marka loo eego halka laga soo dejinayo biraawsarka
Gali tusaha halka faylka lagala soo baxay laga soo saaray:
Tani hubin doonaa haddii keydadka lagama maarmaanka ah la heli karo si loo hubiyo rakibo dhib la'aan. Haddii ay jiraan digniino, qoraalka ayaa dib loo ordi karaa iyadoon wax ikhtiyaar ah loo lahayn in la dhiso keydadka loo baahan yahay
Oo waxaan dib u bilaabi
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » AMD waxay sii deysay darawalkii AMDGPU oo taageero ka helaya X.Org 18.1
Waxaan jeclahay AMD aad iyo aad iyo aad.
Jawaab John Chuca